Soo dejisan Recuva 1.53.1087 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaRecuva
Bogga rasmiga ah: Recuva
Recuva – software ah inuu ka soo kabsado si qalad ah tirtiray, files lumay ama kharribmay. baaritaano software iyo qaab faylasha heli karaa inuu ka soo kabsado ku drives adag, qalabka mobile, kaararka xusuusta, USB-drives iyo sidayaal kale xogta. Recuva leeyahay shaqo ah search haboon oo dhamaystiran magacyadoodii, fayl, cajaladaha iyo qaabab file. software soo bandhigayaa xaaladda files soo celiyey on dhammeystirka geeddi-socodka dib u soo kabashada. Recuva leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Recovery of files tirtiray oo ku kharribeen
Search Advanced File
Recovery of macluumaad ku saabsan sidayaal xog kala duwan
Soo dejisan Recuva
Faallo ku saabsan Recuva
Recuva Xirfadaha la xiriira
Xirfadlaha Dib-u-celinta Exiland – software ayaa loogu talagalay in lagu kabo xogta laga helo ilaha gudaha ama dibaddaba iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo lagu doorto heerka isugeynta ee kaydinta.
Tani waa menu bilaaban qaabka Windows XP, kaas oo lagu lifaaqi karaa xayeysiiska. Software waxay u sahlaysaa helitaanka deg-deg ah nidaamyada kala duwan.